DHEGEYSO-Shacabka degmada Burtinle oo soodhoweeyey in Daljir xorriyaddeedii dib u hesho. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Shacabka degmada Burtinle oo soodhoweeyey in Daljir xorriyaddeedii dib u hesho.
Luulyo 5, 2016 2:32 b 0
(July 05 2016)-Dadwaynaha reer Burtinle ayaa soo dhaweeyey dib ufurida idaacada radio daljir, waxaana dadkaasi kamid ah nabadoonada wax garadka iyo cuqaasha ee ka tisran shacabka reer Buurtinle uguna hambalyeey madaxwaynaha in uu daljir xoriyadeedii dib usiiyo.
Cabdi Axmed Diiriye (Farateeb), ayaa soo ururiyey.
DHEGEYSO-Natiijada Imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee Puntland oo lashaaciyey.
Somali’s President Hasan Sheik Mohamud condemns terror attacks in Saudi Arabia.